बढी व्याज दिने प्रलोभनमा सर्वसाधारणको पैसा लिइरहेका छन् सुन व्यापारी
काठमाडाैं- सुन व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय पैसा कमाउने नयाँ धन्दा सुरु गरेका छन् । व्यवसायीले सर्वसाधारणसँग महँगो ब्याज दिने प्रलोभनमा पारेर सर्वसाधारणसँग पैसा लिइरहेका छन् । खासगरी देशको पूर्वी क्षेत्रमा यो...
किन घटिरहेको छ जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान ?
काठमाडाैं- सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन गरेका थुप्रै प्रयासका बाबजुद पनि नेपाली कृषि क्षेत्र भने कमजोर बन्दै गइरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान निरन्तर घटिरहेकाले पनि य...
२५ अर्ब खर्चंदा पनि अझै सकिएन मेलम्ची खानेपानी आयोजना काम
काठमाडौं– नेपालको राजधानी काठमाडौं । यस खाल्डोमा जनजीविकाका सवालमा असरल्ल प्रश्न थुप्रिएका छन् । तिनै प्रश्नैप्रश्नमध्येको एउटा प्रश्न हो, मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा कहिले पिउन पाइन्छ ? २० वर्षअघिदेखि सो...
नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता : कामदारलाई के–के फाइदा ?
नेपाल र मलेसिया सरकारबीच सोमबार कामदार भर्ना, रोजगारी र फिर्तीसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको छ । गत ३ जेठदेखि सरकारले मलेसिया जाने कामदारका लागि श्रम स्वीकृति रोकेको थियो । पछिल्लो समय मले...
‘प्रसाद’ यथार्थमा आधारित काल्पनिक कथा समेटिएकाे फिल्म हो
युद्धविरामकै बीच यमनमा भिडन्त, कम्तीमा २९ लडाकु मारिए